Dhulgariir Sababey dhimashada 82-ruux oo ka dhacey jasiirada Lombok,Indo | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Dhulgariir Sababey dhimashada 82-ruux oo ka dhacey jasiirada Lombok,Indo
Dhulgariir Sababey dhimashada 82-ruux oo ka dhacey jasiirada Lombok,Indo
Baaxada dhul gariirkan ku dhuftay jaziirada Lombok aya lagu sheegay qiyaastii in uu gaarey 6.9 sida ay sheegeen cilmi baarayaal u dhashay Mareykanku taasoo laga garan karo saameyntiisa uu dhulgariirka ku reebay bulshada ku noolaa Jaziirada caanka ah ee Lombok.
Dhul gariir ku dhuftay jaziirada caanka ah Lombok ee dalka Indonesia ayaa galaaftay nolosha dad ka badan 82-Qof kuwaasoo ku noolaa jaziiradaasi loo dalxiis taggo ,sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka.
Hay’adda Masiibooyinka e dowlada Indonesia War ka baxay aayaa lagu sheegay in dad gaaraya 82-ruux ay ku dhinteen dhul-gariirkan tiro intaasi ka badanna weli la la’yahay halka dhismayaal iyo Guryo waaweyn kumanaan guryo ahna ay ku burbureen dhul gariirka ku dhuftay jasiirada dalxiiseedka Lombok.
Madaxa Hay’adda Masiibooyinka Muhammad Rum Burburka guryaha iyo dilaaca dhulka ayaa sababay geerida tirada badan ee dadkan .
fariino iyo Digniino ayay dowladda Indonesia horay ugu soo saartay halista dhul-gariirka iyadoona shacabka ka dalbatay in xiligaasi ay u guuraan goobaha dhul taagga ah ee sahlan tahay in aysan saameyn badani ku yeelan dhulgariirarada
Previous articleRa’iisul Wasaare Khayre oo suudan kaga mahad celiyay taageeradooda wax barasho
Next articleDegaano hoostaga Balcad oo ay la wareegen Ciidanka Xoogga dalka